Android စမတ်ဖုန်းအတွက် အကောင်းဆုံး Free VPN (၅) မျိုး
Android စမတ်ဖုန်းအတွက် အကောင်းဆုံး Free VPN ၅ မျိုး
10 May 2018 . 4:01 PM
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တွေအတွက် အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး Download ဆွဲလို့လည်းအဆင်ပြေမယ့် VPN(Virtual Private Network) App ၅ခုကိုဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ VPN ၅ ခုထဲက တစ်ခုခုကို ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ မကြာခဏဆိုသလို Play Store က အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ အခမဲ့ Download ပြုလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ App နဲ့ Game တွေကို လွယ်ကူစွာနဲ့ Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်သလို မြန်မာ IP နဲ့ ရှာလို့မရ၊ Download လုပ်လို့မရတဲ့ Game နဲ့ App တွေကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်မှာပါ။ အခြား နေရာတွေမှာလည်း လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက VPN ကျော်ပြီး Download ဆွဲဖို့အတွက် VPN ကို Download ဆွဲရာမှာ VPN ကျော်ဖို့လိုနေတဲ့ပြဿနာပါ။ ဘဲဥအစရှာနေရသလိုဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် Play Store ကမဟုတ်ပဲ သီးသန့် Download ရယူနိုင်ဖို့အတွက် စုစည်းဖော်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ စလိုက်ရအောင်
လက်ရှိ ကျွန်တော် အသုံးပြုမိသလောက်မှာတော့ အတော်လေးသဘောကျနေတဲ့ VPN တစ်ခုပါ။ အသုံးပြုရတာ အတော်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါကြောင့် နံပါတ် ၁ နေရာမှာထားထားပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
OpenVPN Connect ကတော့ VPN လောကမှာအတော်လေးသက်တမ်းကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့် VPN App တစ်ခုပါ။ အသုံးပြုရတဲ့ UI ရိုးရှင်းသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ Feature တွေကလည်း တော်တော်ကိုစုံလင်တာတွေ့ရပါတယ်။ စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ Free နဲ့ Paid Version ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ Free မှာတော့ VPN အသုံးပြုခွင့် Bandwidth တလကို 500MB သာရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ Unlimited အနေနဲ့ Download ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လစဉ်ကြေး $9.99 ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Free ကို အကန့်အသတ်နဲ့သုံးရတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ကယ်ကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးဝင်တဲ့ VPN တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ပုံမှန်သုံးနေကျမဟုတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
#4 Psiphon VPN
Play Store က App တွေ Download လုပ်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံး App လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ သုံးတာကြာလာရင် Market Location တောင် ပြောင်းသွားတာကိုကြုံဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘာ VPN မှမလိုတော့ပဲ Play Store က App တွေကို Download လုပ်လို့ရသွားတာမျိုးပါ။ စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
ProtonVPN ကလည်း Free ထဲမှာမှ တော်တော်လေးကို လန်းတဲ့ Feature တွေပါဝင်တဲ့ VPN Service တစ်ခုပါ။ အကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Payment ပိုင်းမှာလုံးဝ Free ဖြစ်တဲ့အပြင် ကြော်ငြာ Ads တွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတာပါပဲ။ Unlimited Data Usage ဖြစ်တာကြောင့် VPN ကိုအချိန်ပြည့်နီးပါးအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရွေးချယ်စရာ နိုင်ငံတွေလည်း အတော်လေးစုံစုံလင်လင် ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့် အခုမှ VPN စသုံးမယ့်သူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ် VPN ကောင်းမလဲ စမ်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အထူးသင့်တော်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
Download Proton VPN Here
အခုဖော်ပြပေးခဲ့တာကတော့ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Android VPN Service App ၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Akhayar-Tech ရဲ့ Fan တွေထဲမှာရော VPN သုံးနေတဲ့သူတွေရှိလား၊ ဘယ် VPN ကသုံးလို့အဆင်ပြေလဲ…? ဝင်ရောက်ဆွေးနွှေးပေးခဲ့ပါဦး…
Android စမတျဖုနျးအတှကျ အကောငျးဆုံး Free VPN ၅ မြိုး
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တှအေတှကျ အသုံးပွုရတာ လှယျကူရိုးရှငျးပွီး Download ဆှဲလို့လညျးအဆငျပွမေယျ့ VPN(Virtual Private Network) App ၅ခုကိုဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။ ဒီ VPN ၅ ခုထဲက တဈခုခုကို ဆောငျထားမယျဆိုရငျတော့ မကွာခဏဆိုသလို Play Store က အခြိနျအကနျ့အသတျနဲ့ အခမဲ့ Download ပွုလုပျခှငျ့ပေးတဲ့ App နဲ့ Game တှကေို လှယျကူစှာနဲ့ Download ရယူနိုငျမှာဖွဈသလို မွနျမာ IP နဲ့ ရှာလို့မရ၊ Download လုပျလို့မရတဲ့ Game နဲ့ App တှကေိုလညျး ရှာဖှနေိုငျမှာပါ။ အခွား နရောတှမှောလညျး လိုအပျသလိုအသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
လကျရှိဖွဈနတေဲ့ပွဿနာက VPN ကြျောပွီး Download ဆှဲဖို့အတှကျ VPN ကို Download ဆှဲရာမှာ VPN ကြျောဖို့လိုနတေဲ့ပွဿနာပါ။ ဘဲဥအစရှာနရေသလိုဖွဈနတောပါ။ ဒါကွောငျ့ Play Store ကမဟုတျပဲ သီးသနျ့ Download ရယူနိုငျဖို့အတှကျ စုစညျးဖျောပွပေးရခွငျးဖွဈပါတယျ။ ကဲ စလိုကျရအောငျ
လကျရှိ ကြှနျတျော အသုံးပွုမိသလောကျမှာတော့ အတျောလေးသဘောကနြတေဲ့ VPN တဈခုပါ။ အသုံးပွုရတာ အတျောကိုရိုးရှငျးလှယျကူပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နံပါတျ ၁ နရောမှာထားထားပါတယျ။ စမျးသပျအသုံးပွုခငျြရငျတော့ ဒီနရောကနေ Download ရယူနိုငျပါတယျ။
OpenVPN Connect ကတော့ VPN လောကမှာအတျောလေးသကျတမျးကွာပွီဖွဈတဲ့ ဝါရငျ့ VPN App တဈခုပါ။ အသုံးပွုရတဲ့ UI ရိုးရှငျးသလို အသုံးခနြိုငျတဲ့ Feature တှကေလညျး တျောတျောကိုစုံလငျတာတှရေ့ပါတယျ။ စမျးသပျအသုံးပွုခငျြရငျတော့ ဒီနရောမှာ Download ရယူနိုငျပါတယျ။
သူကတော့ Free နဲ့ Paid Version ၂ မြိုးရှိပါတယျ။ Free မှာတော့ VPN အသုံးပွုခှငျ့ Bandwidth တလကို 500MB သာရရှိမှာဖွဈပွီး၊ Unlimited အနနေဲ့ Download ပွုလုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ လစဉျကွေး $9.99 ဖွငျ့အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Free ကို အကနျ့အသတျနဲ့သုံးရတယျဆိုပမေယျ့ တဈကယျကို ထိထိရောကျရောကျအသုံးဝငျတဲ့ VPN တဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ပုံမှနျသုံးနကေမြဟုတျတဲ့သူတှအေနနေဲ့ အတျောလေးအဆငျပွပေါတယျ။
Play Store က App တှေ Download လုပျဖို့အတှကျအသငျ့တျောဆုံး App လို့တောငျပွောလို့ရပါတယျ။ သုံးတာကွာလာရငျ Market Location တောငျ ပွောငျးသှားတာကိုကွုံဖူးပါတယျ။ နောကျပိုငျး ဘာ VPN မှမလိုတော့ပဲ Play Store က App တှကေို Download လုပျလို့ရသှားတာမြိုးပါ။ စမျးသပျအသုံးပွုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီနရောမှာ Download ရယူနိုငျပါတယျ။
ProtonVPN ကလညျး Free ထဲမှာမှ တျောတျောလေးကို လနျးတဲ့ Feature တှပေါဝငျတဲ့ VPN Service တဈခုပါ။ အကောငျးဆုံးတဈခကျြကိုပွောပါဆိုရငျတော့ Payment ပိုငျးမှာလုံးဝ Free ဖွဈတဲ့အပွငျ ကွျောငွာ Ads တှကေိုလညျး ထညျ့သှငျးထားခွငျးမရှိတာပါပဲ။ Unlimited Data Usage ဖွဈတာကွောငျ့ VPN ကိုအခြိနျပွညျ့နီးပါးအသုံးပွုခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရှေးခယျြစရာ နိုငျငံတှလေညျး အတျောလေးစုံစုံလငျလငျ ထညျ့သှငျးပေးထားတာကွောငျ့ အခုမှ VPN စသုံးမယျ့သူတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ ဘယျ VPN ကောငျးမလဲ စမျးကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ အထူးသငျ့တျောမယျလို့ယုံကွညျပါတယျ။
အခုဖျောပွပေးခဲ့တာကတော့ လကျရှိမှာ အကောငျးဆုံးနဲ့ အလှယျဆုံးအသုံးပွုနိုငျတဲ့ Android VPN Service App ၅ခုပဲဖွဈပါတယျ။ Akhayar-Tech ရဲ့ Fan တှထေဲမှာရော VPN သုံးနတေဲ့သူတှရှေိလား၊ ဘယျ VPN ကသုံးလို့အဆငျပွလေဲ…? ဝငျရောကျဆှေးနှေးပေးခဲ့ပါဦး…